नेपाली सिमाको रक्षा गर्न शक्तिशाली हतियार सहित तीन हेलिकोप्टर र जहाज खरिद गरिँदै ओली सरकार ?::Pathivara News
नेपाली सिमाको रक्षा गर्न शक्तिशाली हतियार सहित तीन हेलिकोप्टर र जहाज खरिद गरिँदै ओली सरकार ?
काठमाडौ सरकारले नेपाली सेनाका लागि ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको हतियार किन्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नाम नखुलाइएका ६४ सय ९२ थान र एम १६ सिरिजका १० हजार हतियार तथा गोलीगट्ठा खरिदको तयारी सरकारले अघि बढाएको हो । रक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई २९ असारमा पेस गरेको कार्ययोजनामा हतियार र गोलीगट्ठा खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
रक्षाको प्रतिवेदनअनुसार ‘सैनिक जवानले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत हतियार ६ हजार चार सय ९२ थान’ खरिदका लागि तीन अर्ब ४५ करोड चार लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा हतियारको मेसिनरी औजार पनि समेटिएको छ । यसैगरी, यो आवमा पुराना हतियारलाई प्रतिस्थापन गर्दै १० हजार थान एम १६ सिरिजका हतियार खरिदका लागि दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको रक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीन हेलिकोप्टर र जहाज खरिद गरिँदै
असारसम्म दुईवटा एमआइ १७ भी ५ हेलिकोप्टर, एउटा मिडियम भिभिआइपी हेलिकोप्टर, एउटा फिक्स विङ जहाज, दुईवटा ट्रेनर जहाज खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यीमध्ये यो वर्ष एउटा मेडियम भिभिआइपी हेलिकोप्टर (इटालियन), एउटा इन्डोनेसिएन फिक्स्ड विङ जहाज, दुईवटा अमेरिकी ट्रेनर जहाज ल्याइनेछ । दुईवटा रसियन एमआइ१७भी ५ हेलिकोप्टर अर्को वर्ष मात्रै प्राप्त हुने रक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सैनिक सामग्री उत्पादनका लागि ७.६२ एमएम गोली उत्पादनका लागि मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसैगरी, डबल बेस प्रोपेलान्ट प्रोडक्सन प्लान्ट किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी असारभित्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरावलोकन गर्ने, कात्तिकभित्र कार्यदल गठन गर्ने र मस्यौदा तयार गर्ने छ ।